Umhla My Pet » 5 Imithetho Kukuba Wingman
ukubuyekezwa: Mar. 31 2020 | 2 min ukufunda
Ukuba wingman abathembileyo nengcali ecaleni wakho imisele nokuba uyakuba ushiyeke umfazi omhle okanye wedwa. ngezantsi, siye wayehlanganisa imithetho ilungileyo yokuba wingman ekugqibeleni.
umthetho #1: Lowo uzayo kuqala, wamnyula
Nyaniseka, kufuna isibindi sokuthetha iqela kwabasetyhini ndiqalise incoko ngenxa esichengeni ukudutyulwa phantsi okanye hayi embetha nayo. Kuthatha kwakhona ubuchule lokuthetha abafazi ngendlela elungileyo. Ngoko ulawulo yethu yokuqala: lowo uzayo ngempumelelo kuqala, ufumana ukhetho lokuqala abafazi.
umthetho #2: Ukunyanga abahlobo bakho lasekunene
Abafazi bafunde lukhulu ubonile ingakumbi ngamadoda abo banomdla. Act ezifana abahlobo bakho aba bantu apholileyo uyazi. Kuphela Ndinaloo nkoloseko ke baya kuqaqamba off kodwa umfazi uya ngephanyazo kuba phi umdla kuwe. Ditching abahlobo bakho ukuba umfazi uthe wazi imizuzu elishumi nje ibonisa ukuba lithemba.
umthetho #3: Zihlonele ratio
Ukuba umhlobo wakho ethetha inani elingumnqakathi amabhinqa, kumthabathela njenge cue ukusondela iqela ukunceda ukulinganisa ratio. khumbula, ukuba ekugqibeleni embetha ngamanzi enye intombazana ingakumbi, usafuna ukuba bahlale kunye neqela. Ukushiya naloo mfazi iya kumshiya wingman lakho mfo ngaphantsi oko kuthetha ukuba akuphumelelanga. Ixesha kuphela ukuba kulungile ukuba ikhefu ukuba ratio kunto. Ngaloo ndlela ke ufumana ixesha wedwa namabhinqa amahle.
umthetho #4: Yenza kwaye utsho ukuba yintoni umhlobo wakho akakwazi
Lo mgaqo lungundoqo wingmen. Linda de umhlobo wakho uya lokuhlambela okanye Ephethe isiselo kwaye uthethe ngayo iimpawu zakhe kangangoko ngendlela non-ngqo. Iingongoma ibhonasi, musa ukuthetha ngqo intombazana unomdla. Ncokola nabahlobo bakhe nilinde bade aliphinde.
Ukuze siphephe ukuba ngqo kakhulu umhlobo wakho, xa kubonakala ukuba ubusuku enamajikojiko phantsi bacebisa esinye isiselo yokugqibela okanye uhambe ukuya eluphahleni ukonwabela imboniselo emangalisayo.
umthetho #5: Act efana umdlalo
Xa ubona ukuba ube phakathi umhlobo wakho nomfazi unomdla, ukuqala owenza bethetha ngathi sele isibini. Le ubuchule “ekukhuseleni”, kuya kuba nesiphumo emangalisayo njengoko abafazi bachatshazelwa sub-unxibelelwano ngaphezu nyani into ayithethayo.
Njengoko esi sikhokelo entsimini ngesandla, ngoku ukulungele ukuba ube yimpumelelo ubusuku ngaphandle edolophini.